General - Creativos Online | Creativos Online (Pejy 10)
Loharano 20 maimaim-poana izay tsy azonao hadino amin'ny maha mpamorona anao
Tranonkala 20 hahitana ny loharanom-pahalalana rehetra, na lesona, fanaingoana, endritsoratra, sary masina, sary, sns.
Fandraisana tanana mampidi-doza ho an'ny bisikileta
Ny zavakanto an-tanàn-dehibe izay azontsika jerena eny an-dalambe dia mamela antsika hiditra amin'ny graffiti toa ilay noforonin'ny mpanao hatsikana bikismo
Marika lehibe 10 nanova ny famolavolana logo azy ireo tamin'ny 2014
Ny 2014 dia taona iray nanovan'ny marika toa ny PayPal na Barcadi ny sary famantarana azy ireo ho an'ny zavatra ankehitriny kokoa amin'ny fironana famolavolana
Fampianarana video mahaliana 100 ho an'ny mpamorona (II)
Ny fanangonana fampianarana video miisa 100 ho an'ny mpamorona sary, novolavolaina tamin'ny Creativos Online. Sahy ve ianao hiara-miasa aminay?
Fampianarana video mahaliana 100 ho an'ny mpamorona (I)
Fanambarana fampianarana video miisa 100 ilaina avy amin'ny Creativos Online Mbola tsy hitanao ve izy ireo? Inona no andrasanao?
Ireo sary sokitra tena zava-misy an'i Kazuhiro Tsuji
Kazuhiro Tsuji amin'ny sary sokitra be loatra dia misy an'i Salvador Dalí sy ireo manam-pahaizana malaza hafa
Ireo biby goavam-be an'ny zodiaka noforonin'i Damon Hellandbrand
Damon Hellandbrand dia naka sary an-tsaina sy naneho sary famantarana zodiaka 12 lehibe izay mety hampifoha anao
Fampianarana horonan-tsary: ​​Mamolavola fanesoesoana mavitrika anao
Ao amin'ny horonantsary manaraka dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mamorona mock-up mavitrika amin'ny Adobe Photoshop sy After Effects.
Animation Mock Ups: Fomba vaovao hanehoana ny asanay
Fantatrao ve ireo hatsikana mihetsika? Jereo hoe manao ahoana izy ireo ary ahoana no fomba hampiasanao azy ireo amin'ny tetikasanao.
Ny fizotry ny fanaovana sary saribao an'i Stefan Harris
Ny sary saribao dia tsy asa mora fa raha mahita ny teknika marina ianao dia afaka manao asa mahafinaritra
Lahatsary momba ny horonantsary: ​​maodely miloko, loko Pantone ary CMYK ao amin'ny Photoshop
Ao amin'ny lesona video manaraka dia hodinihintsika ny maody loko sy ny fampiasana ny katalaogy pantone ao amin'ny Adobe Photoshop.
Ny hosodoko nomerika dia iray amin'ireo teknika lamaody indrindra amin'izao fotoana izao ary ampiasaina hanamboarana sary mahafinaritra
Sehatra geodesika vita amin'ny rindrina ihany
Mpanakanto maro isan-karazany no mampiseho ny fomba famoronana tontolon'ny geode izay tsy misy afa-tsy ny sary an-tsary na baoritra na ahoana na ahoana
Katerina Plotnikova sy ny sary mahafinaritra azy miaraka amin'ny bibidia
Tatitra sary momba ny olombelona miaraka amin'ny bibidia nalain'i mpaka sary Katerina Plotnikova's. Tsy mampino.
Kitapo Vector Noely Taona Vintage
Fanangonana sary vongana krismasy maimaimpoana ho an'ny mpamorona sary, misy poster, flyers, badge ary motifs.
Iza amin'ireo tranonkala an-tserasera no tsara kokoa hanehoana ny portfolio, Behance na Dribbble?
Behance na Dribbble no safidy roa tsara indrindra hanehoana ny portfolio-nao an-tserasera sy hahatratra mpanjifa bebe kokoa
Ny sary nomerika VS ny sary analog
Inona avy no mahasamihafa ny sary nomerika sy analog? Fa maninona no lasa malaza be ny fomba voalohany?
Ny fanontaniana lehibe: inona ny sary?
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona ny sary ary ahoana no mahatratra ny atidohantsika? Ho gaga ianao raha mahafantatra ny fitoviana eo amin'ny maso sy ny fakan-tsary.
Sary hosodoko Goldfish 3D an'i Riusuke Fukahori
Riusuke Fukahori dia namolavola teknika tsy mampino hamoronana trondro volamena 3D amin'ny alalàn'ny resin aidina
Tutorial video: Effect glitch data
Tutorial video mba hianarana ny fomba fampiharana ny effets glitch Data avy amin'ny fampiharana Adobe Photoshop amin'ny fomba tsotra sy haingana.
Lahatsary momba ny horonantsary: ​​fiantraikan'ny mason'ny trondro ao amin'ny Photoshop
Fampianarana horonan-tsary hianarana ny fomba fampiharana tsara ny vokatra Fisheye avy amin'ny Adobe Photoshop fa tsy mila Plugins na add-ons.
Video tutorial: Adobe Photoshop 3D Effect
Fampianarana horonan-tsary hianarana ny fomba fampiharana ny vokany 3D amin'ireo forongonay amin'ny fomba tsotra sy mahomby amin'ny alàlan'ny fampiharana ny Adobe Photoshop.
Lahatsary video: Animation an'ny oram-panala amin'ny Photoshop
Fampianarana horonan-tsary hianarana ny fomba famoronana sary mihetsika amin'ny tadion-lanezy amin'ny Adobe Photoshop amin'ny fomba mora sy mahomby.
Kalandrie famoronana maimaim-poana 2015
Safidy maimaim-poana amin'ny kalandrie mamorona sy azo ovaina amin'ny taona 2015 ho avy.
Sary momba ny doka: ny fizotry ny famolavolana tsikelikely
Ahoana no hiatrehantsika ny asantsika isan'andro hahomby? Ahoana ny fomba fizotry ny famolavolana arahan'ny matihanina?
Mila takelaka misy sary aho. Iza no hovidiko?
Ny takelaka sary dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny mpamorona sary ary raha mitady iray isika dia mamorona ny tsara indrindra ny marika Wacom
Mahita ny famoronana!
Nahita zavaboary 14 niaraka tamin'ny tambajotra sosialy Instagram izahay. Famoronana 14 hafa tanteraka izay hamelombelona ny famoronana ao anatin'ny segondra vitsy.
+20 loharanom-pahalalana sary ho an'ny orinasanao
Ny fanangonana loharanom-pahalalana sary maherin'ny roapolo ho an'ny karazana orinasa.
Fitsipika fototra 8: ny ABC amin'ny famolavolana sary
Fitsipika fototra 8 izay tokony ho raisin'ireo mpamorona endrika rehetra rehefa miasa na manatanteraka tetikasa iray.
Scribble Pen mamela anao hisintona loko 16 tapitrisa
Penina Scribble dia pensilihazo iray izay mamantatra ny tena loko amin'ny alàlan'ny sensor mba hahafahany manao sary azy amin'ny taratasy avy eo
Mandoko ny orana amin'ny canvas nataon'i Kohn, Djukaric ary Imre Toth
Ny orana dia iray amin'ireo trangan-javatra meteorolojika izay nanaitra ny mpanakanto sasany toy ireo telo izay angoninay amin'ity lahatsoratra ity
Ahoana ny fanatsarana ny fahaizantsika mamorona sary
Ahoana no hanatsarako ny fahaizako mamorona sary? Araho ity andiana toro-hevitra ity ary miasà hiasa.
Fahaiza-mahatsapa ny mahazatra: Mianara mihaino ny mpitantara ao ambadik'ireo litera
Inona no atao hoe fahatsapana karazana? Fa maninona no zava-dehibe tokoa ny fandraisanao azy amin'ny maha-mpamorona anao? Ahoana no hanatsarantsika azy?
Saripika: Hadisoana momba ny hevitra sy mahazatra
Ny fanangonana ireo lesoka ara-kevitra indrindra nitranga teo amin'ny tontolon'ny sary.
Hevitra mamorona sy tsy mahazatra: Ireo asa tsy noeritreretinao velively
Fanangonana ireo hevitra momba ny asa famoronana hafahafa sy tsy mahazatra mahazatra azonao eritreretina.
Fanoharana 'Alikan'izao tontolo izao' an'i Lili Chin
Lili Chin dia maneho amin'ny andiam-panoharana ny karazan-kanika rehetra eto ambonin'ny planeta
Kitapo karatra orinasa 100 maimaimpoana
Maodely fonosana maodelin'ny karatra orinasa 100 amin'ny endrika PSD ary azo ovaina.
Fantatrao ve ireo faritra mandrafitra ny lehilahy? Mianara anatomia typografika raha te ho tonga typographer mahay ianao.
Boky fampianarana CorelDraw maimaim-poana
Ny fanangonana boky torolàlana amin'ny teny espaniola ho an'ny kinova Coreldraw rehetra.
Ny tsiambaratelon'ny portfolio tsara
Inona no tokony horaisintsika rehefa mamorona portfolio sy mampahafantatra ny tenantsika amin'ny orinasa hafa isika?
Fianakaviana typografika fototra
Fanasokajiana fototra ny fianakaviana typografika izay tokony ho fantatry ny mpamorona sy ny mpanakanto sary rehetra.
Teknika famoronana, fomba famoronana hevitra
Teknika famoronana hamoronana hevitra amin'ny doka. Fenoy ny eritreritra eo anelanelan'ny tsy mahatsiaro tena sy ny mahatsiaro tena mba hahatratraranao valiny voalohany.
Redbubble, tranokala ahazoana vola fanampiny amin'ny maha-mpamorona azy
Redbubble dia mitondra ny fahafahan'ny mpamorona mahazo vola fanampiny isam-bolana. Tsy hanan-karena ianao fa tsara foana ny mahita mpanjifa
Ireo saribakoly azo antoka an'i Luke Robson
Ireo sary miavaka ataon'ny mpanakanto Luke Robson dia sanganasa gaga amin'ny fampiasana loko mamirapiratra sy ny fifangaroan'ny singa firazanana samihafa
Fototra ho an'ny mpaka sary: ​​Shutter, Shutter Speed, Aperture, ary F #
Inona no vita amin'ny fakantsary? Inona ny shutter sy diaphragm ary inona no ataon'izy ireo?
Olona mamorona ve ianao?
Ny olona mamorona dia olona mieritreritra amin'ny fomba hafa foana, tsy manana fitsarana an-tendrony ary manana boaty fisainana tsy misy fetra.
Sary hosodoko kilasika 10 izay hahatonga anao hitebiteby
Ny fanangonana sary hosodoko kilasika izay namboarina tamin'ny karazana horohoro izay nanamarika ny teo aloha sy aorinan'ny tontolon'ny zavakanto.
Tutorial video: Loomax / Hollywood Effect ao Lightroom
Tutorial video Lightroom izay hianarantsika mampihatra ny vokatr'i Loomax amin'ny forongonay amin'ny fomba tsotra sy matihanina.
Fitaovana fakana sary matihanina: Inona no kojakoja ilaiko? (II)
Inona avy ireo zavatra na fitaovana ilaina haka sary miloko? Inona ny fitaovana fakana sary matihanina?
Sary 8 manaitaitra indrindra amin'ny tantara
Ny fanangonana ireo sary valo manaitra indrindra amin'ny tantaran'ny sary izay tsy nahita fanazavana mandraka androany.
Ny sarin'ny pensilihazo be mpahazo an'i Monica Lee
Monica Lee, mpanakanto avy any Malezia, dia manome fanomezana kanto manaitra ho an'ny sary ho an'ny tenany
Sketches nataon'ny mpamorona lamaody Oscar de la Renta
Oscar de la Renta dia nanana fahaiza-manao sary tena tsara toa ireo sary ireo
Lesona 5 amin'ny lightroom lesona XNUMX: antsipiriany, fihenan'ny tabataba ary fifantohana
Lightroom course Lesona 5: antsipirian'ny Lightroom. Ahoana ny fomba hanenjana ny sarintsika amin'ny fomba mazava sy tsotra.
Fanadihadiana sary momba ny afisy angano ny sarimihetsika mampatahotra (I)
Fanadihadiana sary momba ny afisy mampatahotra indrindra amin'ny tantaran'ny sinema.
Sary 20 izay hanova ny fomba fahitanao ny fiainana
Ny fanangonana sary roapolo izay hanova ny fomba fahazoanao ny fiainana, ny olombelona ary izao tontolo izao.
Inona ny loko miloko ary ahoana ny fanesorana azy?
Ny foto-kevitry ny mpandoko loko dia fototra ho an'ny mpaka sary na mpamorona rehetra. Fantatrao ve ny fomba fiasa na ny fanovana ny sary miloko amin'ny sary?
Kitapo mivalana rà amin'ny endrika PNG
Fonosana rà sy tsiranoka mihoatra ny 20 amin'ny endrika PNG mety tsara amin'ny fiasana ao amin'ny Adobe Photoshop.
Ny fandalinan'i Antony Gormley ny vatan'olombelona amin'ny endrika tsy dia fahita firy
Ny vatan'olombelona no fototry ny asa kanto nataon'i Antony Gormley izay asehonay anao avy amin'ity lahatsoratra ity ao amin'ny Creativos Online
Fampianarana mahavariana 100 ho an'ny Halloween (I)
Ny fanangonana tutorial tsy mampino 100 ho an'ny Halloween hamoronana endrika ambony miaraka amin'ny hatsarana maizina, mampatahotra na mampivadi-po.
19 Template Flyer & Poster maimaim-poana amin'ny Halloween (PSD)
Fanangonana modely maimaimpoana hamoronana Flyers sy afisy ho an'ny Halloween.
Tutorial amin'ny horonan-tsary Photoshop: Ranomaso rà (mampiavaka)
Fampianarana horonan-tsary hianarana ny fomba fampiharana ranomaso, ratra ary hatsatra amin'ny toetrantsika amin'ny fampiharana photoshop adobe.
Boky fampianarana Adobe Indesign maimaim-poana: CS3, CS4, CS5, CS6 ary CC
Ny fanangonana boky torolàlana amin'ny PDF sy Espaniola an'ny Adobe InDesign, maimaim-poana.
Karatra fandraharahana 5 miaraka amina endrika kanto miorina amin'ny hazo voasokitra
Karatra fandraharahana 5 izay manana kitay ho zava-kendreny indrindra raha ny manaitra ny mpanjifa
Famoronana boky: singa mamatotra
Liana amin'ny asa famoronana boky ve ianao? Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manomboka amin'ny fahalalana ireo singa mandrafitra ny vokatra sy ny asany ianao.
Kitiho ny effets manokana 50 ho an'ny Adobe After Effects
Kitapo misy effets manokana dimampolo ho an'ny fampiharana Adobe After Effects maimaimpoana.
Plugins Photoshop 10 tokony andramo (I)
Fisafidianana plugins tena ilaina folo ho an'ny Adobe Photoshop.
Volavolan-dahatsoratra: Karazan-tsarin'ny lattice
Amin'ny famolavolana fanontana dia afaka manoritsoritra ny atiny manaraka ny firafitra samihafa isika, zava-dehibe ny fahalalana ny fanasokajiana ireo rafitra reticular.
Boky fampianarana Adobe After Effects CS3, CS4, CS5, CS6 ary CC amin'ny teny Espaniôla
Fanangonana boky ho an'ny adobe aorian'ny vokany amin'ny teny Espaniola sy maimaim-poana.
Famaritana borosy fonosana ho an'ny Photoshop (I)
Kitapo Mega fonosana enina fonosana (borosy ho an'ny volomaso, volo, elatra, maso, hoditra ...) Maimaimpoana tanteraka
Famoronana rafitra lattice: singa sy fiasa
Inona no atao hoe rafitra lattice? Ahoana no fomba fampivoarako ny iray hiasa amin'ny famolavolana fanontana?
Fampianarana mahavariana 8 ho an'ny Adobe Photoshop
Ny fananganana tutorial ho an'ny matihanina valo ho an'ny fiasa amin'ny adobe photoshop application
Tutorial video: Ampiharo ny makiazy nomerika azo tsapain-tanana amin'ny Photoshop
Fampianarana horonan-tsary hianaranao ny fomba fiasa amin'ny Photoshop hampiharana makiazy nomerika amin'ny fomba tena misy amin'ny toetrantsika.
Video tutorial Integrated Watercolor Effect amin'ny Adobe Photoshop
Fampianarana horonan-tsary hianarantsika hampihatra ny volo vita amin'ny watercolor mitambatra amin'ny sarinay.
The Master in the Art of Origami nataon'i artist Eric Joisel
Erico Joisel dia tompon'andraikitra amin'ny kanton'ny Origami mifototra amin'ny taratasy ho ivon'ny zava-drehetra
Eto ny ho avy: ny sarimiaina 3d tena misy eto amin'ny Internet
Ny tontolon'ny teknolojia dia mitombo amin'ny hafainganam-pandeha mahavariana. Fantatrao ve hoe hatraiza ny fahafahantsika mandeha amin'ny tontolon'ny sarimiaina 3D?
Tranonkala sary 14 loharano misokatra avo lenta
Tranonkala fakana sary 14 misokatra ho an'ny karazana tetikasa sy asa rehetra
Inona ny vokatra Moirè?
Fantatrao ve ny vokatr'izany moirè izany? Jereo hoe ahoana ny fipoirany, ny fomba fanesorana azy ary ny fomba fampiasana azy.
Inona no tambajotra media sosialy tsara indrindra amin'ny fampiroboroboana ny kanto sy ny fikarohana ny mpanjifa?
Ny tambajotran-tserasera amin'ny fampiroboroboana ny kanto toa ny Behance, Dribble na Instagram, dia afaka mahazo mpanjifa
Boky tena ilaina 10 ho an'ny mpamorona sary
Ny fanangonana boky lafatra folo ho an'ny mpamorona sary sy matihanina natokana ho an'ny tontolon'ny sary.
Kitapo modely 40 ho an'ny sisintany akademika ao amin'ny PSD
Ny fanangonana modely fari-pahaizana akademika sy matihanina efapolo amin'ny vidiny ambany dia ambany.
Fitaovana fakana sary matihanina: inona ny kojakoja ilaiko?
Inona avy ireo fitaovana sary tokony hananako raha te hanokan-tena amin'ny sary amin'ny fomba matihanina aho?
Ny herin'ny loko amin'ny famolavolana logo
Ny loko amin'ny famolavolana sary famantarana dia ilaina amin'ny logo iray misy fiantraikany amin'ny mpanjifa sy ny vokatra natolotra
Boky torolàlana Adobe Illustrator maimaimpoana: CS3, CS4, CS5, CS6, CC
Kitapo boky fampianarana maimaim-poana ary amin'ny Espaniôla an'ny Adobe Illustrator. Andininy CS3, CS4, CS5, CS6 ary CC.
3 fampianarana maimaimpoana ho an'ny Adobe InDesign
Ny fanangonana taranja telo maimaimpoana an-tserasera hampahafantatra antsika ny tontolon'ny layout miaraka amin'ny fampiharana Adobe InDesign.
Template flyer 10 maimaim-poana amin'ny endrika PSD
Ny fanangonana modely folo hamoronana afisy dokam-barotra sy dokam-barotra amin'ny hetsika, fety ary fivarotana vokatra. Ilaina amin'ny mpamorona rehetra.
Mamorona endrika fototra amin'ny Adobe Illustrator
Androany aho dia hampianatra anao hamorona endrika geometrika fototra ary hampiasa azy ireo, miaraka amin'ireo fitaovana natokana ho azy.
Angano 5 momba ny famolavolana sary izay nanome ny asany manokana
Angano 5 momba ny famolavolana sary izay nanova tanteraka ny lalan'izy ireo tamin'ny fotoana iray tamin'ny asany
Torohevitra, fika ary teknika an-tsary nomerika 500
Fantatrao ve ny boky 500 torohevitra, fika ary teknikan'ny sary nomerika? Raha miditra amin'ny tontolon'ny kanto sary ianao dia tokony.
Ahoana ny fomba hiarovana ny sariko amin'ny zon'ny mpamorona? (I)
Ny fiarovana ny asantsika dia zava-dehibe toy ny fanaovana azy tsara. Noho izany, raha mpanakanto mpitazana ianao dia ilaina ny fahalalana ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona.
Fitaovana 9 hisolo ny Adobe Fireworks
Fitaovana 9 hafa hisolo ny Adobe Fireworks
Torohevitra vitsivitsy hanatsarana ny sary famantarana iray ary hataony lasa miavaka kokoa
Ny fanatsarana ny sary famantarana dia tanjon'ny orinasa sasany te-hivoatra tsy tapaka
Adobe Illustrator: Fa inona izany ary inona no ilana azy?
Illustrator dia programa fanaovana sary vongana Adobe izay efa nisy nandritra ny 25 taona mahery, izay referansa mazava ao anatin'ny indostrian'ny famolavolana.
The Art of Paper: Fitsipika momba ny famolavolana afisy
Mpanakanto iray no mampianatra antsika amin'ny alàlan'ny fampiasana kanto taratasy ny fitsipiky ny afisy
Saron'ny rakipeo kasety
Ny famolavolana ny kasety vita amin'ny kasety dia mety ho toy ny fotoana iray hahitana hevitra vitsivitsy amin'ny Vintage
Tonga ny Affinity Designer hanavao ny endrika sary amin'ny Mac
Affinity Designer dia rindrambaiko famolavolana sary vaovao izay mety mitovy amin'ny Adobe Illustrator mihitsy
Hevitra vaovao momba ny fanavaozana ny sary famantarana ny marika Adidas
Ny marika Adidas dia iray amin'ireo malaza indrindra ary ny logo azy dia eken'ny rehetra amin'ny tsipika diagonal telo
Mianara mampiasa ny sivana polar coordin
Ampiasao ny sivana polar coordure hanamboarana sary tsy azo antoka miaraka amin'ny photoshop
Fampiasana ny fitaovana Pen ao amin'ny Adobe Photoshop
Androany dia hanohy hiresaka momba ny fitaovana fanaovana sary Adobe Photoshop izahay, ary indrindra ireo safidy mandroso amin'ny fitaovana Pen.
Ahoana no anaovana ny andraikitra?
Ianaro ny fomba namoronana ny medium indrindra ampiasaina eto amin'izao tontolo izao hanoratana ny fisian'izany: taratasy.
Fitsipika volamena 5 hamoronana endritsoratra mahatalanjona
Fitsipika volamena 5 hoy ny mpanakanto manam-pahaizana amin'ny sehatry ny typografika
Inona no sy ny fomba fampiasana Adobe Kuler
Androany aho hanolotra ny fampiharana, ny fomba hanombohana miasa miaraka aminy.
Ny fitaovana tsara indrindra hamoronana typografika anao manokana
Fitaovana 4 hamoronana typografika anao manokana ary mampiseho ny fiovan'ny fahaizana mamorona endritsoratra
Ahoana ny fampiasana maody Quick Mask amin'ny Photoshop
Androany no hitondrako anao ny farany amin'ireo lesona an-dahatsary natolotro ho an'ny fitaovan'ny fifantina, ho fitaovana entintsika anio, na ho famenon'ny hafa, na fomba hafa hanaovana azy. Androany no itondrako anao ny lahatsoratra, Ahoana ny fampiasana ny maody Quick Mask amin'ny Photoshop.
Ny sary an-tsaina tsy mahomby amin'ny sary sokitra taratasy an'i Li Hongbo
Li Hongbo dia mpanakanto hihaona, miaraka amina fatorana manokana amin'ny taratasy sy hamoronana sary sokitra taratasy mahafinaritra indrindra
Karatra fandraharahana 20 manavao ho an'ny karazana matihanina sy orinasa rehetra
Ireo mpanakanto maro karazana indrindra dia mitondra karatra fandraharahana tany am-boalohany sy amin'ny famoronana
5 ohatra mpanakanto amin'ny firavaka haingo
Ny famolavolana haingo dia zavakanto efa an-jatony izay niaraka tamintsika hatry ny ela. Mpanakanto avant-garde dimy izay mampiseho fa miavaka ny endrik'izy ireo
Fomba fampiasana ireo fitaovana Selection ao amin'ny Photoshop
Androany isika dia hianatra ny fomba fampiasana ireo fitaovana Selection mahazatra indrindra ao amin'ny Photoshop. Izany dia hanampy anao hitantana ny tenanao tsara kokoa amin'ny programa.
Ohatra 4 miavaka amin'ny zavakanto vaky
Mpanakanto efatra manana zava-kanto fraktaly ho iray amin'ireo toerana manan-danja aminy rehefa maneho ny fahaiza-mamorona rehetra amin'ity karazana haitao ity
Ahoana ny fomba fanaovana banner tsy mihetsika ao amin'ny Photoshop 2 (famaranana)
Androany isika dia hamita ilay tutorial an-tsary tsotra izay nanaovanay sora-baventy, ary izay nianaranay ny fampiasana ny fitaovana Timeline.
Kitapo maimaim-poana amin'ny fiaviana geometrika 20
Kitapo maimaim-poana misy fiaviana geometrika na polygonal roapolo tonga lafatra hiasa amin'ny karazana tetikasa rehetra.
Cubist Weekend: Tutorial Sublime 10 (II)
Fanangonana tutorial cubist ho an'ny Adobe Photoshop sy Adobe Illustrator. Te hianatra hiasa amin'ny foto-kevitra cubist ve ianao?
Cubist Weekend: Tutorial Sublime 10 (I)
Cubism: peta-drindrina mampihetsi-po 10
Fanangonana afisy folo manome aingam-panahy amin'ny endrika cubist. Ny famolavolana sary koa dia voataona amin'ny alàlan'ny vanim-potoana avant-garde.
Cubism: Iza no nilaza fa tsy zavakanto ny matematika?
Inona no fantatrao momba ny kubism? Ahoana ny fiantraikany amin'ny famolavolana sary sy ny zavakanto taty aoriana? Fampidirana ny hevitra momba ny cubism indrindra.
Scribus: programa fandefasana maimaimpoana
Fantatrao ve ny programa fisoratana anarana maimaim-poana antsoina hoe Scribus? Tsy tara loatra raha tsara ny fahasambarana, eto dia atolotro anao ny programa sy ny boky fampianarana.
Ny toetran'i Bruce Timm ao amin'ny Batman: The Animated Series
Bruce Timm dia namorona ny ankamaroan'ny tarehin-tsoratra tamin'ny iray amin'ireo andian-tsarimihetsika lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra: Batman ny andiany mihetsika
Tutorial: Mamorona, manaova automatique ary mitahiry hetsika ao amin'ny Photoshop
Fampianarana hianarana ny fomba famoronana hetsika avy amin'ny rangotra, tahirizo ao amin'ny solosaintsika ary ampiharo azy ireo amina rakitra maromaro.
Video-Tutorial: Ahoana ny fomba fanaovana banner tsy mihetsika ao amin'ny Photoshop mora foana
Androany amin'ity Tutorial-video ity dia hampianatra anao ny fomba fanoratana sy fanomanana tetikasa iray hamoronana sora-baventy miaraka amin'ny programa Adobe Photoshop izahay.
Fampianarana: ampidiro amin'ny paoma ny tarehy (ii)
Fampianarana Adobe Photoshop hianatra hamelona sy hanefitra ireo zavatra amin'ny fomba azo itokisana amin'ny fikarakarana ireo singa fampidirana mba hanomezana zava-misy.
Tutorial: ampidiro amin'ny paoma ny tarehy (i)
20 Amazing Surreal Tutorials (II)
Ny fananganana tutorial 20 mahagaga sy lavorary hiasa amin'ny hevitra tsy azo antoka amin'ny alàlan'ny fanodikodinana sary.
Surrealism: peta-drindrina mandrisika
Fanangonana ny afisy amin'izao fotoana izao ny surrealism, tonga lafatra hanome aingam-panahy antsika sy hahatakatra ny fototry ny hatsarana amin'ity fomba ity.
Tutorials Surreal Mahagaga 20 (I)
Fivoaran'ny Kanona kanto vehivavy nandritra ny taonjato maro (II)
Famerenana ny fivoaran'ny tantara ny Kanona kanto mandritra ny taona XX sy XXI. Ahoana no niovan'ny idealy hatsarana nandritra ny taona maro?
Fitantanana loko: Metamerism
Inona no atao hoe metamerisma? Ahoana no hiadiana amin'izany? Hevitra tena lehibe izy io rehefa tsy maintsy mikarakara ny fitantanana ny loko amin'ny pirinty isika.
Kitapo Sparkle maimaim-poana ho an'ny Photoshop
Kitapo mangirana 50 maimaim-poana amin'ny endrika PNG sy JPG mety tsara ampiasaina amin'ny Adobe Photoshop. Ho an'ny fampiasana manokana sy ara-barotra.
Fivoaran'ny canon ny hatsaran-tarehy vehivavy nandritra ny taonjato maro
Ny fanangonana ny kanônan'ny hatsaran-tarehy vehivavy mandritra ny tantaran'izao tontolo izao. Ahoana no, nisy ary ho vehivavy tsara tarehy tamin'ny fomba fijery kanto?
Fisafidianana plugins tsara 10 ho an'ny After effects (I)
Fanangonana plugins tena ilaina folo hiasa amin'ny sehatra matihanina amin'ny Adobe After Effects. Raha mpamorona ianao, dia tsy azonao hadinoina.
Tantara momba ny doka: Daty tsy hay hadinoina (I)
Ny fanangonana tsangambato an-tantara amin'ny tantaran'ny dokam-barotra. Hatramin'ny niandohany ka hatramin'ny 1955. Mbola tsy fantatrao hoe inona ilay doka voalohany?
Fampianarana photoshop: effet hafainganana
Fampianarana Adobe Photoshop hianaranao ny fomba hamoronana ny vokatry ny hafainganam-pandehan'ny sary ary hanome ny dynamism antsika bebe kokoa.
Teknika fandresen-dahatra amin'ny doka
Ny fanangonana ireo teknika lehibe ho an'ny fandresen-dahatra amin'ny doka. Tena mandaitra amin'ny fampidirana anay amin'ny serasera dokam-barotra.
Mega Pack: loharano 5Gb ho an'ny famolavolana tranonkala MAIMAIMPOANA
Ny fanangonana loharanom-pahalalana mihoatra ny dimy gigabytes ho an'ny mpamorona, tonga lafatra amin'ny famolavolana tranonkala ary miasa amin'ity karazana tetikasa ity.
Tutorial amin'ny Photoshop: effet Harris Shutter
Tutorial izay mampiseho ny fomba fampiharana ny vokatra Harris Shutter ao amin'ny firaketanay amin'ny alàlan'ny fampiharana ny Adobe Photoshop. Mora, haingana, tsotra.
Afisy fahavaratra mampihetsi-po
Ny fanangonana afisy folo karazana fahavaratra mety amin'ny famoronana taratasy fampiroboroboana sy afisy. Mahazo aingam-panahy avy amin'izy ireo!
Fianarana famolavolana sary 5 maimaim-poana
Fanangonana taranja dimy maimaim-poana ho an'ny famolavolana sary. Te-hanomboka amin'ny fitaovana famolavolana malaza indrindra ve ianao? Mahaliana anao ity lahatsoratra ity.
Fampianarana: Atambaro ny sary an'ohatra miaraka amin'ny sary Adobe Photoshop
Amin'ity lesona ity dia ho hitantsika ny fomba fampifangaroana sary ao amin'ny Adobe Photoshop hamoronana firaketana misy singa vector sy bitmaps.
Teknika amin'ny famoronana hevitra (III): Synectics
Ny fanangonana fombafomba hamoronana hevitra vaovao ary hiasa amin'ny famoronana.
Fampianarana Photoshop: Manatsara ny sary amin'ny fampiasana Internet
Fampianarana hianarana ny fomba hanatsarana ny sary izay ho voatondro amin'ny Internet. Hizaha ny toerana misy anao ao amin'ny JPEG, PNG ary GIF.
Teknika hiteraka hevitra (II): Fitsapana ny fahaiza-mamorona
Ny fanangonana ny fomba fisainana an-tsokosoko mba hiteraka hevitra vaovao sy hiasa amin'ny famoronana.
Drafitra fonosana mahagaga 20
Famolavolana endrika famonosana famoronana 20 izay misongadina amin'ny fomba fijery sary. Pérfectos hanome aingam-panahy antsika amin'izany.
Teknika amin'ny famoronana hevitra (I): Fomba fisainana aoriana
Mianara mamorona lahatsoratra famafazana ao amin'ny Photoshop
Mianara mamorona lahatsoratra aerosol ao amin'ny Photoshop amin'ny fomba mora sy amin'ny loharano rehetra ilainao ilainao. Ataovy mamorona kokoa ny volanao.
Banky horonan-tsarimihetsika HD (I)
Ny fanangonana ireo banky misy horonantsary dimy izay misy ny atiny HD sy Full HD ho an'ny asantsika matihanina.
+ 50 loharanom-pahalalana minimalista maimaimpoana
Fanangonana loharanom-pahalalana minimalista dimampolo mahery ho an'ny mpamorona sary, ao anatin'izany ny vektor, afisy ary logo.
Faran'ny faran'ny herinandro minimum: fampianarana ambony 10
Fanambarana fampianarana folo hamoronana firaketana amin'ny fomba minimalista, manomboka amin'ny afisy ka hatramin'ny pejy web na portfolio.
Fitsipiky ny fitambarana: The Graphic Artist's Guide (II)
Famerenana ireo fitsipika fitambarana folo tena ilaina mba hiatrehana ny famoronana karazana firafitra rehetra. Fantatrao ve izy ireo?
Fitsipiky ny fitambarana: The The graphic artist's Guide (I)
Ohatra mahagaga 10 momba ny doka subliminaly
Ohatra folo amin'ny tolo-kevitra momba ny dokam-barotra subliminaly miresaka momba ny singa sy ny firaisana ara-nofo mba hitaomana ny hetahetan'ny mpijery.
Hadisoana 10 tsy nampoizina teo amin'ny sehatry ny film
Ny fananganana hadisoana sinema folo mahagaga amin'ny sarimihetsika mahafinaritra izay mety tsy noheverinao.
Kitapo Gothic: loharanom-pahalalana horonantsary + 50 maimaim-poana amin'ny endrika PSD
Kitapo loharanom-pahalalana Gothic ho an'ny mpamorona sary miaraka amina rakitra amin'ny endrika PSD, azo sintomina ary misy singa mavitrika mihoatra ny dimampolo azo ovaina.
Faran'ny faran'ny herinandro Gothic: Tutorials amin'ny effets 10 mahery
Ny fananganana tutorial maimaim-poana amin'ny fomba Gothic miisa folo maimaimpoana tanteraka. Manantena aho fa nankafizinao izany!
Zavatra 25 tsy ho azonao raha mpamorona endrika ianao
Anekdota, vazivazy ary fahalianana manodidina ny tontolon'ny famolavolana sary. Mety hanombohana ny faran'ny herinandro amin'ny tongotra ankavanana.
StayFocusd, fampiharana tena ilaina hiasa tsara kokoa
StayFocusd dia mahavita mampitombo ny vokatrao amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo fanelingelenana iraisana amin'ny asa tsy miankina, izay fampiharana ilaina tokoa ho an'ny mpamorona.
Psychology loko: Curiosities momba ny niandohany
Ny te hahafanta-javatra momba ny tantara momba ny psikolojia momba ny loko sy ny niandohan'ny sasany amin'ny dikany izay lazainay amin'ny loko ankehitriny.
Kitapo Retro: fisie 50 amin'ny endrika PSD MAIMAIMPOANA
Ny fanangonana rakitra 50 amin'ny endrika Retro .psd endrika mety indrindra ho an'ny tetikasanay na mba ho aingam-panahy avy amin'izy ireo ary azo ovaina tanteraka.
Vintage vs. fomba Retro: ohatra 15 manome aingam-panahy
Ny fanangonana sanganasa dimy ambin'ny folo amin'ny endriny Retro sy Vintage izay hanome aingam-panahy anao rehefa miasa amin'ny afisy sy tetikasa hafa.
Retro Weekend: Tutorials amin'ny effets 10 mahery
Ny fanangonana fampianarana momba ny fomba Retro folo ho an'ny karazana tetikasa rehetra: Afisy, afisy, sarintany, endritsoratra ... Ankafizo izy ireo!
Smart Objects ao amin'ny Photoshop
Fanombohana torolàlana momba ny zavatra mahomby amin'ny Photoshop. Famerenana ivelany ny fotokeviny, ny fampiasana azy, miasa miaraka amin'ireo zavatra maranitra sy sivana.
Tutorial: fomba 5 hanamafisana ny sarinay
Fomba dimy hanatsarana ny hamafin'ny sarinay sy ny sarimihetsika ao amin'ny Adobe Photoshop. Mora, haingana, matihanina.
Fampianarana horonantsary: ​​Vokatra vita amin'ny taratasy rovitra ao amin'ny Adobe Photoshop + Aorian'ny effets
Lahatsary video hamoronana sary mihetsika taratasy amin'ny alàlan'ny Adobe Photoshop sy Adobe After Effect fa tsy mila plugins na extensions.
Ny takelaka fototra InDesign | Tutorial ho an'ny mpamorona layout
Alohan'ny hanombohanao ny asanao amin'ny sehatry ny famolavolana editorial dia mila fantatrao hoe inona ilay kofehin-trano InDesign.
Fampiharana 10 tsy maintsy ananana ho an'ny mpaka sary
Ny fanangonana ireo fampiharana folo tena mahaliana ho an'ireo mpaka sary mpankafy sy matihanina. Fandaharana ho an'ny PC sy finday avo lenta.
Ohatra 20 amin'ny doka famoronana
Ny fanangonana ohatra roapolo momba ny doka famoronana. Tolo-kevitra mahavariana natao hisarika ny saintsika amin'ny fomba majika.
Angano momba ny boky tantara an-tsary: ​​dia avy tany 1929 (II)
Ny fanangonana angano tantara an-tsary hatramin'ny taona 1929. Ampahany faharoa amin'ity fanangonana ity izay ahitan'ny mpanoratra toa an'i Stan Lee sy Quino fiheverana manokana.
Inona ny Cargocollective ary maninona aho no mamorona portfolio-tserasera ao?
Fanontaniana napetraky ny maro amintsika tamin'ny tenantsika izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita hevitra manokana momba ny atao hoe Cargocollective (pro sy cons) ianao.
Angano momba ny boky tantara an-tsary: ​​dia avy tany 1929 (I)
Ny fanangonana olona malaza indrindra sy malaza eo amin'ny tontolon'ny tantara an-tsary. Anecdotes sy fampahalalana avy amin'ny sary an-tsary izay nanaitra an'izao tontolo izao.
Manokana amin'ny famolavolana sary
manandanja dia zava-dehibe amin'ny asa rehetra. Ity misy fanasokajiana ireo sampana lehibe amin'ny famolavolana sary.
Sary tsy mampino 52 tsy misy fampiasana Photoshop
Ny fanangonana sary tsy mampino 52 tsy misy fampiasana Photoshop na fampiharana retouching sary hafa. Tsara jerena izany.
VideoScribe: Ilay doka tianao noforonina hatrizay
Ny Videoscribe dia fampiharana iray ahafahanao mamorona horonan-tsary HD miaraka amin'ny estetika dokambarotra amin'ny fomba tena misy. Tsy fantatrao ve?
Fampianarana mahafinaritra folo ho an'ny Illustrator
Ny fanangonana tutorial maimaimpoana folo ho an'ny Adobe Illustrator izay tonga lafatra amin'ny fianarana ny fampiasana ilay rindranasa.
Portfolio tsara 10 vita amin'ny Cargocollective ary fanasana 4 maimaim-poana
Mila manao portfolio amin'ny Internet ianao ary tsy fantatrao ny fomba. Eto ianao dia hahita portfolio 10 tsara vita amin'ny Cargollective ary afaka mahazo fanasana maimaimpoana ianao.
Famoronana izay tokony harahinao amin'ny Instagram ho fitaomam-panahy isan'andro
Fantatrao fa loharanom-tsindrimandry manan-danja ny Instagram, saingy vaovao ianao ary tsy fantatrao ny olona ao amin'ilay sehatra. Jereo eto hoe iza no hanaraka amin'ny Instagram.
Avadiho ny endrika InDesign ho modely Word amin'ny dingana 6
Mila manova ny lahatsoratra misy ny taratasin'izy ireo ny mpanjifanao: noho izany, mianara mamorona modely Word avy amin'ny volavolanao ao amin'ny InDesign. Haingana sy mora!
Aiza aho no mianatra famolavolana sary? Ivotoerana 14 tsara indrindra any Espana
Ny fanangonana ivon-toerana espaniola 14 tsara indrindra handinihana ny famolavolana sary. Fanasokajiana nataon'ny vondrona oniversite Patata Brava.
Teny nindramina 100 mila henoin'ny mpanakanto rehetra
Teny nalaina 100 avy amin'ny olona manan-danja amin'ny tantara manerantany. Manentana ny fanahy ary mety ho an'ny olona mamorona, ho an'ny mpanakanto.
Tutorial: Famolavolana Karakter Tim Burton amin'ny AI (3)
Fampianarana Adobe Illustrator handrafetana ny endri-tsoratra Tim Burton amin'ny fomba mora sy mora ho an'ny vao manomboka. Tsikelikely.
Torohevitra 13 momba ny taolam-paty tokony hodinihin'ny mpamorona rehetra
Firy ny karazana tokony hampiasaiko amin'ny endrika? Inona ny habeny? Lafiny inona avy no tokony hokarohiko? Vakio eto ireo torohevitra momba ny typografika izay tokony ho fantatrao amin'ny maha-mpamorona azy.
Torohevitra 8 momba ny karazana Spiekermann (Infographic)
Raha te hanokan-tena amin'ny famolavolana sary ianao dia tsy maintsy jerena ireo torohevitra 8 momba ny typografika nomen'i Erik Spierkermann, typographer fanta-daza.
Tutorial: Famolavolana Karakter Tim Burton amin'ny AI (2)
Tutorial: Famolavolana Karakter Tim Burton amin'ny AI (1)
Fisafidianana ny fanasana 20 tsara indrindra amin'ny mariazy
Ny fanangonana fanasana 20 tsara amin'ny fampakaram-bady amin'ity taona ity ary manadihady ireo singa miverimberina indrindra amin'ny endriny izahay: manavaka ny tenanao!
Sary 69 tokony ho hitanao alohan'ny hahafatesanao
Fanangonana sary 69 manaitra ny tantaran'ny zanak'olombelona. Ady, fitiavana, fifanandrifian-javatra, zava-nitranga ara-tantara ... mandresy!
Tambajotra sosialy manokana ho an'ny mpamorona sary
Tambajotra sosialy maro no manampy antsika hizara ny asanay, omena lanja, mahazo tsikera sy tolotra asa. Ho an'ny mpamorona sary fotsiny.
Fomba fanoharana 5 hafa hanome aingam-panahy anao
Androany izahay mitondra anao amin'ny fomba samihafa amin'ny fanoharana izay hanome aingam-panahy anao: fomba fisainana samihafa momba ny loko, ny fanaovana sary, ny famoronana, ny fakana ...
Teny filamatra 25 nanamarika a aloha sy aoriana
Ny fanangonana ireo teny filamatra nanamarika ny teo aloha sy aorin'izao tontolo izao amin'ny doka ary ho ohatra sy aingam-panahy ho an'ny mpamorona vaovao.
Ampidiro ao anaty Illustrator CS6 ny paleta miloko
Fampianarana fanazavana momba ny fomba famoahana palety miloko namboarin'i Adobe Kuler amin'ny endrika .ase mampiasa Adobe Illustrator CS6
Curiosities 25 momba ny famolavolana sary
Curiosities 25 momba ny tontolon'ny famolavolana sary, fanaovana fanadihadiana kely ara-tantara sy fivoarana an'ity fifehezana ity.
Portofolio 10 an'ny matihanina amin'ny famolavolana tranonkala
Ireto ambany ireto dia nisafidy portfolio-Internet 10 tamin'ny 2014 an'ny mpamorona tranonkala, mpamorona, mpamorona UI ary UX ary matihanina mitovy hevitra bebe kokoa aminay.
Fisafidianana asa marika 6 tsara
Nisafidy asa marika 6 ho hitanay izahay, dinihina ary ho aingam-panahy: bara, fivarotana fromazy, patissery, mombamomba anao ary maro hafa.
GoAnimate: Mamorona sary mihetsika amin'ny fotoana firaketana
GoAnimate dia pejy web iray izay manome antsika ny fahafaha-mamorona sary mihetsika 2D sy sary mihetsika ho an'ny asa samihafa. Fantatrao ve izy?
Logo 25 ankehitriny hanome aingam-panahy anao
Fantatrao ny fahasarotan'ny fanaovana azy ireo, dia nisafidy logo miisa 25 noforonina tamin'ny taona lasa izahay mba ho hitanao, hianaranao ary hamakafaka.
Manohy ny famoronana ho an'ny mpamorona tranonkala, mpamorona sary, mpanao sary ary maro hafa
17 famerenana mamorona ho an'ny tsiro rehetra izay hanome aingam-panahy anao rehefa mamolavola sy mamorona anao manokana. Manavaka ny tenanao ary mahazo asa amin'ny resume anao!
Boky 18 ho an'ny mpamorona sary sy mpamorona tranonkala
Androan'ny boky anio, ary tianay ny hanao izany amin'ny alàlan'ny fanolorana famakiana andian-dahatsoratra izay hahaliana anao. Boky 18 ho an'ny mpamorona.
Saripika kanto: Tutorial fahazavana II
Fampianarana momba ireo teknika mahomby indrindra sy toerana hazavaina amin'ny sary kanto na horonantsary studio.
Photography Art: Tutorial fahazavana Jiro I
Drafitra ara-pientanam-po: Art, Psychology and Innovation
Ny fihetsem-po dia singa iray tena lehibe rehefa miasa eo amin'ny tontolon'ny famolavolana. Ny injeniera Kansei sy ny endrika ara-pientanam-po dia hanampy antsika amin'izany.
Fampianarana Photoshop: Fitaovana momba ny vato fizarana II
Fampianarana Adobe Photoshop hamoronana sary sokitra avy amin'ny sary ary hiasa amin'ny fandrafetana vato amin'ny fomba tsotra sy tena izy.
Fampianarana Photoshop: firaketana an-tsoratra amin'ny fizarana vato I
Plugins tena ilaina 10 ho an'ny Photoshop
Ny fanangonana plugins 10 tsara tarehy ho an'ny Adobe Photoshop izay ho tian'ny mpamorona rehetra ho fantatra.
Ny hitsin-dàlana fitendry azo ampiharina indrindra ao amin'ny Illustrator ampahany II
Kitapo fitendry azo ampiharina kokoa ao amin'ny Illustrator ho an'ny Windows sy Mac, tena ilaina tokoa hahazoana tombony, fahakingana ary famokarana.
Shortcuts Keyboard mora ampiasaina indrindra an'ny Illustrator Fizarana I
Ny fironana miloko amin'ny famolavolana sary 2014: loko Pantone
Loko Pantone mandritra ny vanim-potoanan'ny Lohataona 2014. Mety ho an'ny mpamorona amin'ny karazan-karazany rehetra, mba hisafidianana fitambarana mety indrindra amin'ny zavatra noforoninay.
Fampianarana 20 hanatanterahana ny fahaizanao Photoshop
Ny fametrahana ireo fampianarana ireo ho fampiharana dia hahatonga anao hahatsapa ho mazoto kokoa, hampiditra ny dingana sasany ary hanatsara ny fikirakiranao ny Photoshop.
Inona no atao hoe fampahalalana fohy sy ny fomba fanaovana azy, torolàlana fohy ho an'ny mpanjifa
Inona ity? Ahoana no anaovako azy? Torolàlana fohy ho an'ny mpanjifa amin'ny fomba fanaovana fanafohezana (farafahakeliny) ho an'ny mpamorona mba hanao asa tsara. Ampidiro ary omeo ny hevitrao.
Ny hitsin-dalan'ny Photoshop fampiasa indrindra ho an'ny Windows
Ny fanangonana ireo hitsin-dàlan'ny photoshop adobe azo ampiasaina indrindra ao amin'ny Windows mba hanafainganana ny asantsika, hahazoana fahombiazana sy famokarana.
Vector, labels, badges ary sary masina amin'ny fomban'ny Retro maimaimpoana!
Loharano maimaimpoana ho an'ny endrika endrika Retro. Ny fanangonana singa 110 amin'ny karazan-karazany rehetra mba hiasa amin'ny firaketana ny vokatra taloha dia maimaim-poana.
Fanetezana volo amin'ny Photoshop CC: Mora, haingana sy matihanina
Fampianarana horonantsary Photoshop hanamboarana sary nohaingoina matihanina amin'ny fomba tsotra.
Fampianarana horonan-tsary Photoshop CC: Vokatry ny fampidirana, saron-tava, ary fiovaovana
Fampianarana horonan-tsary momba ny Adobe Photoshop CC hianarana hahafehy ny fitaovana Layer Masks sy Variations.
Afisy famoronana 12 hanentana anao
Isika rehetra dia tsy maintsy namolavola afisy amin'ny fotoana iray: tadiavo eto ny aingam-panahy ilaina amin'ny afisy famoronana 12 izay tsy hamela anao tsy hiraharaha anao.
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop (fizarana 7)
Ary hamita ity andalana fampianarana ity momba ny Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop, dia hamita ny asantsika nomerika isika.
Ny maha-zava-dehibe ny famolavolana fohy (I)
Ity andiana lahatsoratra ity dia hanampy anao hampianatra ny mpanjifa ny maha-zava-dehibe ny fanaovana torolàlana famolavolana tsara hahazoana vokatra tsara. Vakio sy omeo ny hevitrao.
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop (fizarana 6)
Adobe Photoshop dia manana fitaovana maro handokoana sy hanaloka ny sarinay, ary amin'ity lesona ity dia hampiharintsika maro amin'izy ireo.
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop (fizarana 5)
Hanohy ny ampahan'ny fahadimy amin'ny tutorial izahay Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop, rehefa nofantsinay ny sary rehetra.
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop (fizarana faha-4)
Ny dingan'ny fidirana amin'ny Adobe Photoshop dia zavatra tena ahazoana aina sy mahafinaritra, ao anatin'ny rafitra miasa mihetsika sy mavitrika kokoa.
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop (fizarana faha-3)
Tamin'ny ampahany teo aloha tamin'ity lesona ity dia hitantsika ny fitambaran'ny fitaovana Photoshop mba hanoratana ny sarinay miaraka amin'ny valiny matihanina.
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop (fizarana faharoa)
Ankehitriny dia hanomboka hiasa mivantana amin'ny sary isika, indrindra indrindra, alohan'ny hanombohana ny kanto izay halehantsika ...
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop
Ny fahafahan'ny fampiasana ny sarinay amin'ny Adobe Photoshop dia iray amin'ireo toetra lehibe ananan'ity rindrambaiko ity. Amin'ity fampianarana ity dia hianaranao ny fampiasana azy ireo.
Tutorial: Fandehanana miasa miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop (Final)
Androany no entiko aminao ny tapany farany amin'ity Tutorial ity, izay namelako anao hampivelatra rafitra fiasa miaraka amin'ny sehatra teknika izay atolotry Adobe anay
Tutorial: Fandehanana miasa miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop (fizarana faha-5)
Manomboka mamita ity tutorial mahaliana ity izahay, izay hianarantsika hiara-hiasa amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop.
Tutorial: Fandehanana miasa miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop (fizarana faha-4)
Manohy ny Tutorial izahay: Workflow miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop izay hianarantsika anio ny mamolavola hetsika.
Tutorial: Fandehanana miasa miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop (Fizarana faha-3).
Manohy ny Tutorial izahay: Workflow miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Photoshop, izay nanomananay vondrona sary hiasa amin'izy ireo ao amin'ny Photoshop,
Tutorial: Fandehanana miasa miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop (Fizarana faha-2)
Tamin'ny lesona teo aloha dia nanomboka nandamina ny fampirimana ireo sary niarahanay niasa tamin'ireo izay heverinay fa mila kitikitihina mba ho tonga lafatra
Tutorial: Fandehanana miasa miaraka amin'ny Adobe Bridge sy Adobe Photoshop (Fizarana I)
Ny matihanina amin'ny sary dia tsy maintsy mahalala ny rafitra teknika natolotry ny haitao, ary koa ny rindrambaiko hahafahany mifaninana amin'ny asany.
Torohevitra momba ny saripika an-dalambe
Raha te hanana ny sarinao an-tanàn-dehibe ianao dia mila manaraka fotsiny ny Torohevitra momba ny sary an-dalambe izay atolotray anao eto ambany.
Tutorial: Mifidiana haingana ny typography miaraka amin'ny Illustrator
Androany dia hiatrika ny lahasa misafidy endritsoratra haingana isika. Izao no hitondrako anao, Tutorial: Misafidiana haingana ny typography miaraka amin'ny Illustrator.
Melissa Ballesteros na ny fomba fanaovana sary toa an'i Bruce Timm ary tsy maty manandrana
Tany am-piandohan'ny taona 90, ny indostrian'ny sarimiaina amerikana dia tao anaty doldrum. Tsy natao ho an'ny kely kokoa izany. Ny tanany ...
Bruno Wagner na ny fomba fanaovana sary andriamanibavy
Ilay mpanao sary Bruno Wagner dia nahaliana an'ireo mpanakanto toa an'i Boris, Siudmak, HR Giger, Brom ary ny sangan'asany dia mitohy manome aingam-panahy avy amin'ireo mpanoratra ireo.
Torolàlana ho an'ny RAW ho an'ny vao manomboka
Ny zavatra fototra rehetra ilainao ho fantatra momba ny RAW, ao amin'ny Torolàlana ho an'ny RAW for Beginners. Ny tsy fitoviana amin'ny JPEG, ny fandidiana sns.
Fitsapana ho an'ny mpamorona: ataovy andrana ny fahaizanao
Androany izahay dia mitondra fanandramana roa ho an'ny mpamorona ianao mba hahafahanao manombana ny fahaizanao indrindra amin'ny sensory indrindra: ny loko sy ny volom-borona. Ohatrinona ny isa azonao tratrarina?
Mamolavola fanadihadiana izay tokony ho hitanao
Ny fanadihadiana fanadihadiana dia fomba iray tsara hianarana foto-kevitra vaovao, ahitana fomba fijery hafa, na hisaintsainana lohahevitra iray. Ity misy lisitra tsara.
Inona ary ny fomba fanaovana tabilao Gantt hampidirina ao amin'ny fifanarahana nataonao
Ny tabilao Gantt dia ahafahantsika mahafantatra ara-maso ireo fe-potoana farany famitana tetikasa. Ianaro eto ny fomba fanaovana azy ho an'ny tetik'asa famolavolana sary.
Manafatra tahiry lehibe miaraka amin'ny PhpMyAdmin
Ny olana lehibe dia tonga rehefa manandrana manafatra angon-drakitra antonony lehibe isika, amin'ity tranga ity dia hitranga ny fetra fampidinana voalamina
Kerning, hevitra tokony ho fantatry ny mpamorona sary
Eto izahay dia mamelombelona ny fahatsiarovanao amin'ny fanazavana ny atao hoe kerning, inona izany, inona ireo karazana misy ary ahoana no ahafahanao manova azy. Hatsarao ny volanao!
Fe-potoana: nofy ratsy noforonin'ny mpamorona sary
Izahay dia mizara aminareo andiana tetika momba ny fomba hahatratrarana ny fetr'andro amin'ny famolavolana sary, mba hiasa tsara kokoa ary tsy dia misy fihenjanana.
Parodies Logos malaza
Nomeko anao ny parodioma famantarana hafahafa sy tsy takatry ny saina indrindra azonao jerena ao amin'ny tranonkala. Andao isika hijery (sy hihomehy) miaraka amin'izy ireo.
Inona no azonao atao amin'ny Cinema 4D
Cinema 4D dia programa famoronana sary mihetsika sy sary 3D namboarin'ny orinasa Maxon. Raha liana amin'ny sary mihetsika ianao dia tokony ho fantatrao izany.
Tutorial: Torohevitra 9 amin'ny fitifirana amin'ny ririnina
Ny volana ririnina dia manolotra fotoana mahafinaritra sasany hakana sary ho an'ny asantsika ririnina na Krismasy.
Fampianarana fototra: pejy master ao amin'ny InDesign
Ho hitanao eto ny fampianarana fototra momba ny fampiasana pejy master ao amin'ny InDesign: inona izy ireo, ny fomba namoronana azy ireo, ny fomba fiasan'izy ireo ... Tena ilaina amin'ny famolavolana.
Hevitra 7 tsara hampitomboana ny fahaizanao mamorona
Manana ny Blokan'ny mpanoratra ve ianao, na Block an'ny Mpamorona? Ahoana raha nolazaiko taminao fa misy fomba sasany hanatsarana ny fahaizanao mamorona?
Toerana 3 hividianana sy hivarotana sary
Manodidina io fe-potoana io, ny zavatra roa mamaritra ny masoivohon'ny sary mikraoba dia ny fifandraisan'ny atiny sy ny fifanarahana tsara.
Izay tokony ho fantatry ny mpamorona sary rehetra momba ny fanontana
Makà mainty tsara, manonta sary ra ... Eto no hahitanao ny fahalalana fototra momba ny fanontana izay tokony ho fantatry ny mpamorona sary rehetra.
Mpitantana asa maimaimpoana 2 izay hanamora ny andronao
Androany izahay dia nanolotra anao mpitantana asa 2 maimaim-poana, fitaovana miasa hahatratrarana fikambanana tsara kokoa (na ho anao na ho an'ny ekipanao).
Ahoana ny teti-bola amin'ny famolavolana sary | Soso-kevitra sy loharanom-pahalalana
Mitadiava torohevitra mahasoa eto hahalalana ny fomba hanaovana teti-bola ho an'ny famolavolana sary: ​​ohatra amin'ny sary, calculatera amin'ny Internet, programa fitantanana ...
Katarina Sokolova sy ny sary an-tsaina nomerika
Katarina Sokolova dia mpanakanto Okrainiana. Ny sangan'asany dia mifototra amin'ny media nomerika, fifangaroan'ny sary, sary hosodoko nomerika ary singa 3D.
Tutorial an'ny Illustrator: Ahoana ny fanaovana sary mihetsika miaraka amin'ny Illustrator
Androany aho mitondra ity fampianarana tsotra nefa mahasoa ity izay ahafahanao mianatra mamorona sary mihetsika Flash, amin'ny alàlan'ny Illustrator irery ihany no ampiasaiko.
Fampianarana Photoshop: Ahoana ny fampiharana ny vokany mitovy amin'ny sary maromaro miasa amina andiany
Te-hanamora ny asan'ny fikarakarana sary samihafa ve ianao raha tsy izany dia andro na herinandro na minitra vitsy na indraindray segondra?
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny WordPress
Reraka ve ianao amin'ny famerenanao ny WordPress? Tokony ho hitanao ny tutorial izay entinay anio. Tsy mora velively ny nanao ny dika mitovy aminao.
Fanesoana 11 ho an'ny maha-orinasa anao
Asehoy amin'ny fomba matihanina ny mombamomba anao miaraka amin'ireo fanesoanana 11 izay entinay anao amin'ity paositra ity ary asaivo milaza ny mpanjifanao "Ataoko."
Vokatry ny tantara an-tsary (tutorial ho an'ny Adobe Illustrator)
Makà vokatra an-tsary momba ny endrika tsy ara-potoana kokoa amin'ny Adobe Illustrator amin'ny fanarahana ny dingana tsikelikely izay hitondranay anao any Creativos anio.
Sebastian Lester sy ny tonony
Sebastian Lester dia typographer iray izay niara-niasa tamin'ny orinasa tsara indrindra eran'izao tontolo izao nanao litera manokana ho azy ireo. Androany no iray amin'ireo be mpitady indrindra.
Doka 8 InDesign izay hanafaingana ny fivezivezinao
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny tetika tsy fantatra 8 izay hanampy anao hiasa haingana kokoa. Hanavotra fotoana kely ianao, hino izany na tsia. Jereo ireto!
Karatra Krismasy 10 hanome aingam-panahy anao
Ny karatra krismasy dia mety ho loharano tena tsara hanehoana ny talentanao. Amin'ity lahatsoratra ity dia nanangona 10 izahay hanome aingam-panahy anao alohan'ny hamoronana.
Logo nifty 12
Isan'andro dia mahita logo an-jatony izahay, fa iza amin'ireo no ho afaka hamokatra ara-tsaina? Ireto misy logo nifty 12 tadidinao. Ary raha tsy izany dia jereo.
Tutorial Photoshop 5 hamoronana bokotra web
Ny ampahany lehibe amin'ny famolavolana pejy web dia ny fomba idiran'ny mpampiasa sy fivezivezena amin'ny tranokala. Ny lehibe indrindra dia ny mikitika ny bokotra, noho izany dia tsy maintsy ataontsika antoka fa manintona izy ireo
Tutorial Photoshop 5 ho an'ny photomontages
Ny teknikan'ny photomontage dia matetika ampiasain'ny mpamorona sary sy mpankafy fanovana sary. Izy io dia misy ny maka sary maromaro ary avy eo manatevin-daharana azy ireo amin'ny fomba iray hisehoana sary tokana
Ny fampiasana an-tsokosoko ny habaka ratsy
Amin'ity lahatsoratra ity dia manangona ohatra tsara 13 izahay amin'ny fampiasana an-tsaina ny habaka ratsy amin'ny famolavolana sary. Manentana ny fanahintsika sy mianatra mahita.
5 Taratasy manome aingam-panahy anao
Ny logo Coca-Cola dia nahavita niaritra rehefa mandeha ny fotoana, angamba noho izy taratasy. Amin'ity lahatsoratra ity dia mitondra taratasy 5 ho anao izahay hanome aingam-panahy anao.